Ndeipi nguva yekupa kati kugamuchirwa? | Noti Katsi
Maria Jose Roldan | | Kugamuchirwa
Dzimwe nguva sarudzo yakaipa kana danho rakaitwa nekukasira rinogona kupedzisira raunza dambudziko mune ramangwana. Kana tagamuchira katsi tinofanirwa kuziva kuti imhuka, kuti haingori nemanzwiro chete asi inogona zvakare kurarama avhareji yemakore makumi maviri.
Kana tichida kuti afare zvechokwadi, zvakafanira kuti tigare tichirangarira izvi, uye kuti anoda akateedzana. Asi zvekuita kana sarudzo isiriyo yaitwa? Tevere ini ndichakuudza iwe kuti upe rinhi katsi kuitiswa.
1 Zvinhu zvekuchengeta mundangariro usati wazvipa kuti zviitwe
1.1 Musiye pamwe naamai vake kusvika ave nemwedzi miviri (zvirinani)
1.2 Usazvisiya mumunda kana mumugwagwa
1.3 Ita shuwa kuti zvichave zvakanaka
2 Katsi yako inoda kuwana imba nyowani?
3 Rubatsiro ruri kunze uko
4 Tsvaga imba nyowani
Zvinhu zvekuchengeta mundangariro usati wazvipa kuti zviitwe
Musiye pamwe naamai vake kusvika ave nemwedzi miviri (zvirinani)
Kana isu tine katsi iyo, chero chikonzero, hatina kuda kana kugona castrate ava nemimba, Unofanira kugara nevana vako zvirinani kusvikira vava nemwedzi miviri yekuzvarwa. Izvo zvakakosha kuti vave pamwe chete panguva iyoyo nekuti nenzira iyi vadiki vanozodzidza kuve uye kuzvibata sezvavari: katsi.
Usazvisiya mumunda kana mumugwagwa
Katsi yakagara nevanhu kashoma kuti irarame mumugwagwa pane iya yakarererwa pairi. Chaizvoizvo, kana iwe uchizoparadzana kubva kune feline, siya iri muShelter kwaunoziva kuti mhuka hadzibayirwe kana kuti uzviwanire iwe uri mhuri nyowani kune iye anochida chaizvo.
Ita shuwa kuti zvichave zvakanaka
Kune avo vanofunga kuti nekuti katsi idiki kana yakanaka haigare kwenguva refu munzvimbo yekuvanda, asi iko kukanganisa kukuru. Dzese dzimba dzekugara dzakazara nembwa uye katsi, purebreds uye mamongrel akamirira kuwana mhuri nyowani. Vazhinji vavo havazombozvikwanisi. Saka Izvo zvinodikanwa kuti iwe uzvizivise iwe pachako nezve nzira yekuita kwenzvimbo iyo kwauri kuenda kunosiya katiZvakanaka, kana iri iyo inosimbisa uye / kana iine mhuka mumakeji asina kucheneswa kazhinji, iyo feline inonzwa ichirwara zvakaipisisa.
Katsi yako inoda kuwana imba nyowani?
Panogona kuve nezvikonzero zvakawanda nei uchifanira kutsvaga imba nyowani yekatsi yako: matambudziko emari, maitiro asingadiwe, chisimbwa kumhuka dzinovaraidza ... Asi sekutaura kwedu pamusoro, usamusiye iye munzira.
Zvinetso zvine chekuita nemhuka zvinogona kuvhiringidza, uye iwe ungangonzwa sekusiya chipfuwo chako ndiyo mhinduro chete. Asi usati watora danho iri, tarisa zviwanikwa zviripo zvekubatsira kugadzirisa matambudziko angaratidzika seanorema pakutanga. Nyaya yakanakisa: haufanire kusiyana nekati yako mushure mezvose. Asi kana ukadaro, matipi edu anogona kukubatsira iwe kuwana chipfuyo chako mumusha mutsva une rudo.
Rubatsiro ruri kunze uko
Iwe une matambudziko ehunhu nekatsi yako here? Iwe unogona kusatofanira kusiya chipfuwo chako. Matambudziko mazhinji ehunhu anogona kukonzerwa neanorapika mamiriro. Semuenzaniso, kati inozvisunungura mubhokisi remarara pamba inogona kutanga kuita weti panze nekuda kwehutachiona hutachiona hutachiona hunogona kuongororwa nyore nyore nekurapwa nachiremba wemhuka.
Kana pasina chikonzero chemuviri chechinetso, yeuka kuti akawanda akajairwa maitiro echipfuva ane mhinduro dzakareruka. Tarisa uone matipi edu pazasi kana funga kubvunza kune hunhu hunhu nyanzvi kana mudzidzisi. Nzvimbo dzekugara dzemhuka kana mapoka ekununura anogona kupa yakachipa-shoma yekuchengetedza zvipfuyo kana mabasa ekudzidzisa kana Vanogona kukuendesa kune mamwe masangano anopa masevhisi aya.
Vanogona kukubatsira kunyaradza katsi dzinotya, kumisa kukwenya kunoparadza kana kutsenga, kugadzirisa matambudziko emabhokisi emarara, nzira yekubatsira mhuka dzinovaraidza kufambidzana, uye nezvimwe.
Matambudziko emumba? Iwe unogona kusatofanira kusiya chipfuwo chako. Kana iwe uchinetseka kuwana dzimba dzinovaraidza-dzinovarairwa, kana uri kusangana nehumwe matambudziko ane chekuita nedzimba, senge chichemo chinogumbura, unogona kuenda kune imwe nzvimbo kunogamuchirwa mhuka dzinovaraidza.
Une chisimbwa kumhuka dzinovaraidza here? Unogona kusatofanira kusiya katsi yako. Iwe unogona kutaura nachiremba wako kuti uone kuti ndezvipi sarudzo zvaunazvo kunyangwe kana uri weergisi kune chipfuwo chako. Iko kunogara kune dzimwe sarudzo uye haufanire kugara uchigovana navo.
Nenzira imwecheteyo, kana uine matambudziko emari ekubhadhara mari inogadzirwa nekati yako, hausi wega. Kune vanhu vazhinji vanogona kusangana nedambudziko remari risingatarisirwe. Usavhunduke kune akawanda masangano nemasangano anogona kukubatsira iwe nechikafu nezvimwe zvinhu zvakakosha zvekuchengetwa kwemhuka. Vanogona zvakare kubatsira uye kukuraira iwe nezvehunhu uye kurasa, pamwe nezvimwe zvakachipa kana zvemahara zvekuchengetwa kwezvipfuyo.
Kana iwe uine mwana kumba, haufanire kusiya katsi yako nekuti iyewo chikamu chemhuri yako uye unogona kuve chikamu chemhuri yako iri kukura yakachengeteka, inofara uye yakabatana. Taura nachiremba wako kana iwe uine mibvunzo, asi haufanire kubvisa katsi yako kuti uwedzere mhuri yako.
Tsvaga imba nyowani
Kana iwe uchifunga kuti kupa chipfuwo chako kurererwa ndiyo sarudzo yakanakisa, gara uchifunga kuti kunyangwe paine kuyedza kwakanyanya kwekugara uye kununura kuchengeta zvipfuyo zvavo, imba yako inowanzo kuve nzvimbo yakanakisa yemhuka yako paunenge uchitsvaga wekurera. .
Nekutora iro basa rekutsvaga pekugara chipfuwo chako, unogona zvakare kudzikisa makwikwi enzvimbo shoma uye zviwanikwa munzvimbo dzekuvanda kana kununura. Heano mamwe matipi ekutsvaga imba ine rudo kune chipfuwo chako:
Ita kuti chipfuwo chako chikwezve kune vangango vatore. Chengetedza chipfuwo chako kubaiwa jekiseni uye nekuongororwa kwese kweveptiki kusvika pari zvino. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti chipfuwo chako charaswa kana kusaregedzwa sezvo izvi zvinogona zvakare kukurudzira iye anogona kutora kuti aite kudaro nekukurumidza.
Shambadza kuburikidza neshamwari, vavakidzani, uye vet vets. Yako wega network ndiyo rakanakisa boka revatambi vechipfuwo chako. Kumbira vet yako kana iwe uchikwanisa kuisa chikwangwani uchizivisa chipfuwo chako chinoda imba nyowani. Isa mapepa anokurudzira chipfuwo chako kubasa, kuchikoro, kuchechi, uye kune dzimwe nzvimbo dzeruzhinji dzaunowanzoenda. Sanganisira yakanaka yemhando pikicha uye inonakidza tsananguro yemhuka yako.
Tora mukana wekushamwaridzana nevamwe. Tumira mufananidzo wepfuyo yako uye nyaya uye kumbira shamwari dzako kuti dzigovere pane avo masocial network.
Iva pachena neanogona kutora. Gadzirira kugovana ruzivo nezve hunhu hwechipfuwo chako uye kuti vanowirirana sei nezvimwe zvipfuyo nevanhu. Goverana zvinhu zvechipfuwo zvako zvaunofarira uye izvo zvisiri-izvo-zvinofarira zvinhu. Uye govana chero matambudziko ekurapa kana ehunhu chipfuwo chako chiri kusangana nevangangodaro varidzi vatsva vane ruzivo rwavanoda kuona kana chipfuwo chavo chikagona kukodzera mhuri yavo.
Tsvaga rubatsiro kubva kumatumba, masangano kana mapoka ekununura. Dzimwe dzimba dzekuchengetedza uye dzekununura dzinogona kutumira yako pet foto uye chimiro pawebhusaiti yavo sekuremekedza rondedzero, nepo chipfuwo chako chichigara mumba mako apo iwe wakamirira anogona kutora kuti apinde muhupenyu hwako.
Sekupedzisira sarudzo, unogona kudzosera chipfuwo chako kunzvimbo yekugara kana yekununura sangano.. Sangano rega rega rinogona kuve nehurongwa hwakasiyana hwekuburitsa chipfuyo kutarisiro yevamwe, asi wana ruzivo nekufonera nzvimbo idzi kutanga kana kutsvaga ruzivo online.
Kunyangwe iyo katsi idiki kana yakakura, pane nguva dzose sarudzo usati waisiya. Ndiye mhuri yako, kana uchigona kugara naye anozove sarudzo yakanakisa yemunhu wese. Asi kana iwe usingakwanise nezvikonzero chero zvikonzero, USAKUNDIKE. Mutsvagire imba inoda kumuchengeta uye kumupa rudo rwaanofanirwa asi rwausingakwanise kumupa izvozvi. Icho chipenyu uye chakakodzera rukudzo rwese pasi.
Tinogona here kudzivirira kuve nekuzviparadzanisa pachedu nekatsi? Eheka. Kuti tiite izvi, zvinokwana kuziva pamberi apo kana tichigona kumuchengeta uye, kana achinge ave nemwedzi mitanhatu yekuzvarwa, kumutora kunochekwa. Chete neizvi tinogona kudzivisa kutambura kwemabhiriyoni ekitsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Ndeipi nguva yekupa kati kugamuchirwa?
Milton garcia akadaro
Mhoro !! masikati akanaka, ndine mibvunzo miviri:
1_ Inguvai mushure mekuzvarwa kwekiti ndinogona kuvapa chikafu chekati?
2_ Sei katsi yangu dzimwe nguva ichinyunyutira nehuku dzayo?
Ndokumbirawo kana muchikwanisa kundibatsira, nekuti inguva yekutanga kuti ndive nekitsi nevana vayo.
Pindura Milton Garcia
1.- Zvakawanda kana zvishoma, pavhiki rechitatu unogona kutanga kupa chikafu chakapfava chekatsi.
2.- Anogona kunge ari mutsva, kana anogona kunzwa kunetsekana, kana ndihwo hunhu hwake
Nezvangu zvikonzero zvekumanikidza majeure, mumwe wangu anofanirwa kutora ake mana akura asi akadzikama katsi nekuti isu hatigone kuva naye munzvimbo yatichagara uye ndaida kuziva kana vangatibatsire nemacontacts enzvimbo kwatinogona kuenda navo kana kuvasiya kuitira kuti kugamuchirwa den
Pindura kuna benjamin
Iyo singapura katsi